Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada New York JFK ee ku socda Lisbon ee TAP Air Portugal hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Wararka Burburinta Portugal • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Duulimaadyada New York JFK ee ku socda Lisbon ee TAP Air Portugal hadda.
TAP 10 ka albaab ee Waqooyiga Ameerika hadda waxay ka kooban yihiin Boston, Cancun, Chicago, Miami, Montreal, Newark, New York (JFK), San Francisco, Toronto, iyo Washington, DC (Dulles).
TAP Air Portugal waxay ku noqotaa gegada diyaaradaha ee New York ee JFK iyo Newark iyadoo duullimaadyo ka soo qaaday Lisbon.
TAP waxay maalin walba ka shaqayn doontaa JFK laga bilaabo Noofambar 7 ilaa Janaayo 31, 2022, taasoo yaraynaysa afar duulimaad toddobaad kasta laga bilaabo Febraayo 2 illaa Maarso 25.
Duulimaadka cusub, TP 210, wuxuu ka ambabixi doonaa JFK 10pm, isagoo imaan doona Lisbon 9:30 subaxnimo, subaxda xigta.
TAP Air Portugal ayaa mar kale ka shaqaynaysa dhammaan 7-da albaab ee laga soo galo Maraykanka iyadoo adeegii laga soo noqday New York Madaarka Caalamiga ah ee John F Kennedy xalay. Adeegga maalinlaha ah ee laga bilaabo JFK illaa Janaayo iyo xilliga xagaaga, New Yorkers waxay yeelan doonaan saddex duulimaad maalinle ah Lisbon TAP, oo ka imanaya JFK iyo Newark Liberty International.
TAP shaqayn doona maalin kasta oo aan joogsi lahayn laga bilaabo JFK laga bilaabo Noofambar 7 ilaa Janaayo 31, 2022, oo lagu dhimo afar duulimaad toddobaadle ah (Isniin, Arbaco, Jimco iyo Axad) laga bilaabo Febraayo 2 illaa Maarso 25. JFK adeeggu wuxuu shaqayn doonaa maalinle mar kale xagaaga, laga bilaabo Maarso 27.
Duulimaadka cusub, TP 210, wuxuu ka ambabixi doonaa JFK 10pm, isagoo imaan doona Lisbon 9:30 subaxnimo, subaxda xigta. Duulimaadka soo laabanaya, TP 209, waxa ay ka bixi doontaa Lisbon 5pm, iyada oo iman doonta JFK 8pm.
Dariiqa cusub waxa lagu shaqayn doonaa diyaaradda TAP's Airbus A330-900neo, oo ay ku jirto hawada cusub ee Airbus cabin.
Qaabeynta qolka iyo nashqadeynta waxay abuurtaa jawi casri ah oo la cusboonaysiiyay, oo leh kuraas leh fadhi qoto dheer oo xagga dhaqaalaha ah, oo ku yaal hadhka daboolka kursi ee cagaar iyo cawl, iyo leh qolal lugood oo badan oo EconomyXtra ah, oo leh hadhyo cagaar iyo casaan ah.
Kursiga fadhiga ee dhaqaalaha caadiga ah waa 31 inji, halka EconomyXtra uu bixinayo saddex inch oo dheeri ah oo lugta lugta ah, oo loogu talagalay garoon 34 inji ah. A330-900neo wuxuu ka kooban yahay 168 kursi ee dhaqaalaha iyo 96 kursi ee EconomyXtra.
Fasalka ganacsiga fulinta ee TAP, TAP waxa ay bixisaa 34 kursi oo si buuxda u fidsan kuwaas oo dhererkoodu ka badan yahay lix cagood marka si buuxda loo dego. Kuraasta fasalka ganacsiga ee TAP waxa ka mid ah meelaha laga baxo ee USB-yada iyo fiilooyinka korantada ee gaarka ah, isku xidhka taleefoonnada gacanta, nalalka akhriska ee shaqsiga ah, iyo meelo badan - oo ay ku jiraan qolal kaydin badan.
TAP 10 ka albaab ee Waqooyiga Ameerika hadda waxay ka kooban yihiin Boston, Cancun, Chicago, Miami, Montreal, Newark, New York (JFK), San Francisco, Toronto, iyo Washington, DC (Dulles). December 11, TAP Air Portugal Waxa kale oo ay soo bandhigi doontaa hawlaheedii ugu horreeyay ee Kariibiyaanka, oo leh adeeg aan joogsi lahayn oo u dhexeeya Lisbon iyo Punta Cana ee Jamhuuriyadda Dominican, TAP's 11th Waqooyiga Ameerika albaabka.